Amakhaya akrelekrele ngokupheleleyo kwaye angenaxhala ekungeneni kweedolophu ezi-3 zaseyunivesithi kumbindi wedolophu (iti yokusela, ukucamngca, iofisi, ukuthandana) - I-Airbnb
Amakhaya akrelekrele ngokupheleleyo kwaye angenaxhala ekungeneni kweedolophu ezi-3 zaseyunivesithi kumbindi wedolophu (iti yokusela, ukucamngca, iofisi, ukuthandana)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu整理师羽哥
Kukho indawo ezimeleyo, kule ndawo, hlala kakuhle kwaye uzithande kakuhle. Unako ukusela iti, uhlale ekhaya, ungafunda, ubhale...wenze unothanda. Indlu yonke ekrelekrele ye-Intanethi yeZinto, amava amatsha.
Indlu yathengwa kuqala kwaye yahonjiswa ukuba umntu azihlalele kuyo.Impahla zintle kakhulu, uyilo lucingela kakhulu, iimpahla kunye nezixhobo zombane zintle kakhulu, iibhedi zihotela zonke ze-five-star, oomatrasi bodidi lokuqala, oomatshini bokuhlamba. kunye yokomisa Zombini. Isifudumezi samanzi sefriji, iTV enkulu yescreen. I-intanethi, iincwadi, iti kunye neseti yeti
Kufuphi needyunivesithi ezintathu, iicinema ezikufutshane, iktv, indawo yokuzivocavoca, isitrato sesnack esigqityiweyo. Ukuthuthwa kukulungele, kufutshane nesikhululo sikaloliwe, kwaye ukuthutha kunabela kuzo zonke iindlela.
Umbuki zindwendwe ngu- 整理师羽哥
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shiyan